ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ကတ်ကြေး & ညှပ် | အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်နှင့်အညှပ် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ပင်မစာမျက်နှာ / ဘာဘာကတ်ကြေး & ညှပ် / 1 ၏စာမျက်နှာ 2
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးသည်နေရာတိုင်း၊ အွန်လိုင်းနှင့်သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါရှိလက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆံညှပ်၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်မော်ဒယ်များ။
ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်နိုင်ငံတကာနှင့်အဓိကအားဖြင့်ယူအက်စ်တွင်အွန်လိုင်းရနိုင်သည် သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကတ်ကြေးနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အစပြုသူများအတွက်လည်းကောင်းတန်ဖိုးအရှိဆုံးကြောင့်လူကြိုက်များသည်။
များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံ ယူအက်စ်အေ၌ရှိခဲ့သည် Juntetsu၊ Kamisoriနှင့် Yasaka.
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဂျပန် / ဂျာမန်သံမဏိများ၏ရင်းမြစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ညှပ်ကတ်ပြားများကိုမာကြောခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအလွန်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံနိုင်သည်။ Ergonomically ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလက်ကိုင်များသည်အစဉ်အလာမှပြီးပြည့်စုံသော offset အဆင့်အထိအစိုင်အခဲ၊
ကတ်ကြေးသို့မဟုတ်ညှပ်၏အရွယ်အစား။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်လက်မ ၅ လက်မမှ ၆ လက်ကြားအကြားဖြစ်သည်
အစဉ်အလာဆံပင်ညှပ်သည့်ကျောင်းများသည်ကျောင်းသားများကိုဖြီးဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းစနစ်များကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည် ဒါကပိုရှည်တဲ့ဓါးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဆံပင်ညှပ်သူများသည်ရှည်သောဓါးသွားကိုသုံးစရာမလိုဘဲဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများကိုသုံးနိုင်သည်။
အကြောင်းပိုမို Read: အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံအားဖြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးရွေးချယ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ညှပ်ကတ်အားလုံးသည်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ၏လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းမှာရှိရမည်ရှိသည့်ကိရိယာများသည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောညှပ်သက်ရောက်မှုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ Japan Scissors တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားစျေးကွက်၌အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောဆံညှပ်ညှပ်ညှပ်များတပ်ဆင်ပေးပါသည်။
သင်သည်ဤစာမျက်နှာတွင်မပါရှိသောအခြားပါးလွှာသည့်ညှပ်ညှပ်ကိုလိုချင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး မှ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ဆံပင်ညှပ်သည်သြစတြေးလျ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းတွင်အရေးကြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ခိုင်မာစွာတည်ရှိသည်။ ယနေ့ဆံပင်ညှပ်စက်များအသုံးပြုသောဆံပင်ညှပ်စက်များသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ ကကဲ့သို့ပင်အလွန်ကွာခြားသည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်လျှပ်စစ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်နှင့်ညှပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်နိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ခြင်းထက်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းထက်ပိုပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကတ်ကြေးများမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်၊ သင့်လျော်သောသန့်ရှင်းရေးအလေ့အကျင့်၊ ဆံပင်ပုံစံများ၊ ဦး ရေပြားဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ.
ဆံပင်ညှပ်နေ့တိုင်းဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲ။ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဆံပင်ကိုကတ်ကြေးနဲ့ဖြတ်ဖို့၊ ဖောက်သည်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နဲ့အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ်လာတဲ့ဖောက်သည်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးစီးပွားရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ ဆံ၏မကြာသေးမီကလူကြိုက်များ သြစတြေးလျတွင်ဆံပင်ညှပ်သူဖြစ်ရန်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကိုလူအများရှာဖွေနေသည်။